गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ
गणतन्त्र प्राप्तिको १० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री बनाउन हामी सफल भएका छौँ । यसरी दश वर्षमा दश वटा प्रधानमन्त्री बनाएर दुनियालाई देखाएका छौँ कि नेपालमा कति अस्थिरता छ । हामीले ७० वर्ष लगाएर नयाँ गणतान्त्रिक संविधान बनाएका छौँ । त्यो संविधानलाई संस्थागत गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा अहिले पनि जटिल छ । समस्या छ । ‘माघ गए, फागुन गए खबर नपाए’ भने जस्तो चैत गयो, वैशाख गयो, जेठ गयो, हामीले निर्वाचन असार १४ गतेलाई लैजादै छौँ । यो किन भई राखेको छ ? अहिले पनि गणतान्त्रिक संविधानमाथि कालो बादल मडारिएको छ । हामी मध्य वर्षामा चुनाव गर्न गई रहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीमा शेर बहादुरजी नयाँ मान्छे हुनु हुन्न । योभन्दा पहिले तीन पटक हामीले उहाँलाई ब्यहोरी सकेका छौँ । यस पालि त झन् उहाँका लागि अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ । तीन तहको चुनाव गराउनु छ । हामीले हिजो स्थानीय ऐन संशोधन गर्‍यौँ । तर जसका लागि संशोधन गरियो, उहाँहरूले नै खुलेआम चुनावमा भाग लिइन्नँ भनी रहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चुनाव भयो र भोट हाल्नु पर्‍यो भने उहाँहरूले संविधान मान्नु हुन्छ र भोट हाल्नु हुन्छ । तर जब स्थानीय चुनावको कुरा आउँछ, उहाँहरूले संविधान मान्दिनँ भन्नु हुन्छ । के यो आश्चर्य होइन ? उहाँहरूले संविधान मान्नु हुन्न भने यही संविधान अन्तर्गत संसदमा भएको चुनावमा तीन÷तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न उहाँहरू कसरी आउनु भयो ? संविधान नमानेकाले त त्यसो गर्नु नपर्ने हो । अनि, स्थानीय चुनावको कुरा आउँदा उहाँहरूले त्यस्तो कुरा मान्दैनौँ, संविधान मान्दैनौँ भन्नु हुन्छ ।
उहाँहरूले संविधान संशोधनको रटान लगाई रहनु भएको छ, हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ । हामीले संविधान संशोधनको विरोध गर्नुका पछाडि खास कारणहरू छन् । प्रचण्डजीकै पालामा संसदमा ल्याइएको त्यो नयाँ संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय निकायलाई कमजोर गराउन कुरा उल्लेख छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष्ँहरूलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई भोट हाल्न दिनु हुँदैन, तिनीहरूको अधिकार कटौती गर्नु पर्छ भन्ने कुरा छ । अनि, सीमाङ्कन गर्दा प्रदेशको पनि स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान छ । संविधानमा तर संशोधन प्रस्तावमा त्यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा आई रहेको छ । नयाँ संविधानमा स्थानीय निकायलाई जुन खालका अधिकार दिइएको छ, जुन खालको प्रावधान भा’छ त्यसलाई खोस्ने खालको संशोधन आई रहेको छ । सङ्घीयताले तलका स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनु पर्छ, स्थानीय निकायलाई पावर दिनु पर्छ भन्ने छ कि दिई सकेको पावर खोस्नु पर्छ भन्ने संशोधन आई रहेको छ ? अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ला ।
अहिलेको बखतमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भा’छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले उहाँलाई यत्तिकै भोट दिएन । हाम्रँे असहमति रह्यो, तैपनि अब तीन तहको चुनाव गर्नु छ । उहाँले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई जति मजबुत गराउनु हुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसमा मद्दत नै गर्ने छ । राम्रा कामका लागि हामीले काङ्ग्रेससँग पनि कार्यगत एकता गर्ने गरेका छौँ । स्वयं रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा हामीले भोट हालेका छौँ । गिरिजा बाबुलाई हामीले भोट हालेका छौँ । प्रतिपक्षको भूमिका यही हुन्छ कि सत्तापक्षले राम्रो गर्दा सहकार्य गर्ने, मद्दत गर्ने, नराम्रो गर्दा खुलेर विरोध गर्ने । प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनमत तयार गर्ने र गलत कामको विरोध गर्ने—यही नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले हिजोदेखिको नीति लिदै आई रहेको छ । अब तीन तहको चुनाव सफल पार्न उहाँलाई असाध्य ठुलो समस्या छ । तर त्यो सफल पार्नका निम्ति राष्ट्रिय जनमोर्चाले उहाँलाई मद्दत नै गर्ने छ ।
अन्तमा उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिदै यो मन्त्रीमण्डलमा जो जो साथीहरू मन्त्री बन्नु भा’छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाइ दिन चाहान्छु । (२०७४ जेष्ठ २६ गते व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा अध्यक्ष केसीले दिनु भएको सङ्क्षिप्त मन्तव्यका सम्पादित अंश)